Uyifaka njani ikhibhodi yomntu wesithathu kwi-iOS 8 | IPhone iindaba
Uyifaka njani ikhibhodi yomntu wesithathu kwi-iOS 8
Faka ikhibhodi yomntu wesithathu akunzima, Kuyafana naxa sifuna ukongeza ulwimi olunye ngakumbi kwigalelo lokubhaliweyo okanye i-emojis.
Mhlawumbi eyona nto inzima yile isigqibo ngekhibhodi Phakathi kwazo okwangoku sithandwa kakhulu, ezi-SwiftKey, Swype, Fleksy, Minuum, njl.
Kwisithuba esidlulileyo besele siphawule njalo I-SwiftKey ifikelele kwisigidi esinye sokukhutshelwa, ke siza kwenza amanyathelo isekwe kufakelo lwale nto.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kuku Khuphela ifayile ye sicelo kwiVenkile yeApple yeApple. Okwangoku ndikushiyela amakhonkco okhuphelo abo bakhankanyiweyo ngaphambili kuba inkqubo iyafana.
Nje ukuba ufake, yiya ku Useto > ngokubanzi > Ikhibhodi > Teclados. Kule thebhu siza kubona esizifakileyo kwaye siya kuba nakho ukukhetha «Yongeza ikhibhodi entsha»
Siyabona ukuba ngaphakathi kwecandelo lekhibhodi yomntu wesithathu yamkela iSwiftKey, ke kuyakufuneka ucofe apha kuphela, okusisa kwiscreen apho kubalulekile ukuba sikunike imvume yokufikelela ngokupheleleyo, kuba kungenjalo ayizukusebenza.
Njengoko unokufunda kwiwindow yokungena, sivumela ukuhanjiswa kwento esiyibhalela umphuhlisi, yonke into, njalo kubalulekile ukuthembela kwisicelo kunye neqela elingemva kwalo kuba uya kuba nakho ukufikelela kwidatha ebaluleke kakhulu. Ngoku unokucinga ukuba awuzukuyibhalela i-akhawunti yakho yebhanki nakubani na, kodwa awunakucinga ngebhodi yezitshixo njengesixhobo sokuthumela imiyalezo, kuba kukufakwa kwedatha kwazo zonke izicelo.
Lixesha lokuba vula usetyenziso lwekhibhodi, kwimeko yethu, SwiftKey. Emva kwesingeniso usinika ngena ngoFacebook okanye kuGoogle + ukufikelela I-SwiftKey Cloud, indawo apho ivenkile amagama ayifunda kuwe, inye niselo indlela obhala ngayo iimpapasho zakho kwiqonga olikhethileyo kunye nendlela lungelelanisa lonke olu lwazi phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo onazo.
Nje ukuba uligqithile eli nyathelo, nokuba sithatha siphi isigqibo, uya kuba nenketho khetha iilwimi oza kuba nazo Ngesicelo, ngokungagqibekanga kuza nesona sixhobo sakho sesiNgesi, sikhutshiwe kodwa singasebenzi. Kulapho kuya kufuneka ukhuphele ngaphandle iilwimi ezongezelelweyo osebenza nazo.
Isicelo ivumela ezinye iindlela ezinje enye yokwenza ukubonakala kwebhodi yezitshixo, kodwa oku sele ukuchitha ixesha elincinci kwaye udlala nayo. Ngoku uya kuba nekhibhodi entsha esebenzayo kwaye ilungele ukusetyenziswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Uyifaka njani ikhibhodi yomntu wesithathu kwi-iOS 8
I-Swype ayikubuzi ukuba isebenze kodwa endaweni yoko kuya kufuneka uhlawule i-0.89 engeyonto
Ibhhakoni eyi- $ 5 yokuthintela umntwana wakho ekulahlekeni
Iimpawu eziphezulu ze-25 ze-iOS 8 (I)